2 Mpanjaka 25 - Ny Baiboly
2 Mpanjaka toko 25
Sedesiasa mpanjakan'i Jodà - Ny nanaovan'i Nabokodonosora fahirano an'i Jerosalema sy ny nandravany azy - Lasan-ko babo ny mponina amin'i Jodà - Ny niafaran'i Joasina.
1Tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Sedesiasa, tamin'ny volana fahafolo, andro fahafolon'ny volana, dia tonga hamely an'i Jerosalema Nabokodonosora mpanjakan'i Babilona sy ny tafiny rehetra; dia niorin-dasy teo anoloany izy, ary nanao manda fanantomorana manodidina azy. 2Natao fahirano hatramin'ny taona faharaika ambin'ny folo nanjakan'i Sedesiasa ny tanàna.
3Tamin'ny andro fahasivin'ny volana, nony efa mafy ny mosary tao an-tanàna, fa tsy nisy mofo intsony ho an'ny vahoakan'ny tany, 4dia nobangaina ny tanàna, dia lasa nandositra avokoa ny lehilahy mpiady, nihazo ny lalan'ny vavahady anelanelan'ny manda roa, akaikin'ny zaridainan'ny mpanjaka; ny Kaldeana amin'izany manodidina ny tanàna eo. Ny làlana mankamin'ny Arabah no nalehan'ny mpanjaka. 5Nenjehin'ny tafiky ny Kaldeana ny mpanjaka, ka trany teo an-tany lemak'i Jerikao; dia niparitaka lavitra azy ny tafiny rehetra. 6Nony voasambotr'izy ireo ny mpanjaka dia nentiny niakatra ho any Rebla, amin'ny mpanjakan'i Babilona, ka namoaka teny fitsarana momba azy izy ireo. 7Ny zanakalahin'i Sedesiasa novonoina teo anatrehan'izy rainy. Rahefa izany, dia nopotsirin'i Nabokodonosora ny mason'i Sedesiasa ary nafatony tamin'ny gadra varahina roa izy, dia nentina nankany Babilona.
8Tamin'ny volana fahadimy, andro fahafiton'ny volana, taona fahasivy ambin'ny folo nanjakan'i Nabokodonosora mpanjakan'i Babilona, dia tonga tao Jerosalema Nabozardana, kapitenin'ny mpiambina mpanompon'ny mpanjakan'i Babilona. 9Nodorany ny tranon'ny Tompo sy ny tranon'ny mpanjaka mbamin'ny trano rehetra tao Jerosalema; nodorany tamin'ny afo avokoa ny trano lehibe. 10Ary noravan'ny tafiky ny Kaldeana rehetra izay niaraka tamin'ny kapitenin'ny mpiambina, ny manda mamaritra manodidina an'i Jerosalema.
11Nentin'i Nabozardana kapitenin'ny mpiambina avokoa ny vahoaka sisa tafajanona tao an-tanàna, sy ny mpilefa nitolo-tena tamin'ny mpanjakan'i Babilona, ary ny vahoaka be sisa rehetra, 12fa olo-mahantra tompon-tany vitsivitsy sisa navelan'ny kapitenin'ny mpiambina ho mpamboly voaloboka sy ho mpiasa tany.
13Nopotehin'ny Kaldeana ny andry varahina izay tao an-tranon'ny Tompo, mbamin'ny fanambanim-piteran-drano ary ny ranomasina varahina izay tao an-tranon'ny Tompo, ka nentiny ho any Babilona ny varahina. 14Nentiny koa ny vilany, ny sotron'afo, ny antsy, ny kapoaka, mbamin'ny fanaka varahina rehetra, nenti-nanao ny fanompoana. 15Nentin'ny kapitenin'ny mpiambina koa ny fanembohana sy ny tasy, ny zavatra volamena sy ny zavatra volafotsy. 16Ny amin'ny andry roa sy ny ranomasina, ary ny fanambanim-pitoeran-drano nataon'i Salomona tao amin'ny tranon'ny Tompo, dia tsy nisy fotony intsony ny handanjana ny varahina amin'ireo fanaka rehetra ireo. 17Ny andry iray dia valo ambin'ny folo hakiho ny hahavony, ary teo amboniny dia nisy koronosy varahina, ary telo hakiho ny hahavon'ny koronosy, ary nisy harato sy voan'ampongaben-danitra nanodidina ny koronosy, ka varahina avokoa izany rehetra izany; torak'izany koa ny andry faharoa mbamin'ny harato aminy.
18Nentin'ny kapitenin'ny mpiambina Saraiasa mpisorona lehibe, sy Sofonia mpisorona ambaratonga faharoa, ary mpiandry varavarana telo lahy. 19Azony tao an-tanàna ny manam-boninahitra anankiray mpifehy ny lehilahy mpiady, ny olona dimy lahy isan'ny mpanolo-tsaina manoloana ny mpanjaka, izay hita tao an-tanàna, ny mpanoratry ny filohan'ny tafika, miadidy ny fandatsahana ny olona amin'ny tany ho miaramila, ary enimpolo lahy amin'ny vahoakan'ny tany, izay hita tao an-tanàna. 20Nony azon'i Nabozardana kapitenin'ny mpiambina ireo, dia nentiny ho any amin'ny manjakan'i Babilona tany Rebla. 21Ka novonoin'ny mpanjakan'i Babilona nataony maty tany Rebla any amin'ny tany Emata
Toy izany no nitondrana an'i Joda ho babo lavitry ny taniny.
22Ny amin'ny vahoaka tafajanona tany amin'ny tanin'i Jodà, navelan'i Nabokodonosora mpanjakan'i Babilona kosa, dia Godoliasa zanak'i Ahikama zanak'i Safana no notendreny ho mpanapaka azy. 23Ren'ny lehiben'ny isan-toko-miaramila, dia izy sy ny olom-peheziny avy, fa hoe Godoliasa no voatendrin'ny mpanjakan'i Babilona ho mpanjaka, dia tonga nanatona an'i Godoliasa tany Masfà izy ireo: Ismaela zanak'i Nataniasa; Johanana, zanak'i Karea; Saraiasa zanak'i Tanehometa avy ao Netofà, ary Jezoniasa zanak'ilay Maakatiana, dia ireo sy ny olom-peheziny avy. 24Ka tamim-pianianana no nilazan'i Godoliasa tamin'izy ireo sy tamin'ireo olom-peheziny hoe: Aza misy hatahoranareo akory raha ny amin'ny mpanompon'ny Kaldeana, fa monena amin'ny tany, manompoa ny mpanjakan'i Babilona, fa izany no hanasoa anareo. 25Kanjo nony tamin'ny volana fahafito, tonga Nataniasa zanak'i Elisama, isam-pianakavian'ny mpanjaka, nomban'olona folo lahy, ka namono nahafaty an'i Godoliasa mbamin'ireo Jody sy Kaldeana teo aminy tany Masfà. 26Ka ny vahoaka rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, mbamin'ireo lehiben'ny isan-toko-miaramila, dia niainga ka lasa nitsoaka nankany Ejipta fa natahotra ny Kaldeana.
27Tamin'ny taona fahafito amby telopolo nahalasan-ko babo an'i Joasina, mpanjakan'i Jodà, tamin'ny volana faharoa ambin'ny folo, andro fahafito amby roapolon'ny volana, dia nasandratr'i Evil-Merodaka, mpanjakan'i Babilona, ny lohan'i Joasina, mpanjakan'i Jodà, ka nesoriny tao an-tranomaizina tamin'ny taona nahatongavany ho mpanjaka. 28Nanaovany teny soa izy, nataony ambonin'ny seza fiandrianan'ireo mpanjaka teo aminy tany Babilona ny seza fiandrianany, 29nasainy nosoloina ny fitafiany tany an-tranomaizina, ary nihinan-kanina mandrakariva teo anatrehany izy, tamin'ny andro niainany rehetra. 30Ny amin'ny fivelomany, dia ny fivelomany lalandava, dia ny mpanjaka no niantoka izany isan'andro tamin'ny andro rehetra niainany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0253 seconds